TechGameBox - Ciyaartoyda Adduunka
XBOX TAXANAHA X/S
Halkan ka daawo Nintendo Direct maanta
Ugu dambeyntii, waxaan haysanaa Nintendo Direct hab sax ah jadwalka. Dhegayso 2pm wakhtiga UK si aad u daawato bandhiga socon doona 25 daqiiqo, diiradana ku saaraya ciyaaraha kooxda saddexaad. Filo in la eego ciyaaraha beddelka ee ay sameeyeen shirkado aan ahayn Nintendo - sidaa darteed, rajo ma leh Zelda: Neefta Duurjoogta 2 wararka halkan. isha
Hideo Kojima ayaa mar qorsheeyey mashruuc heer sare ah sida Amazon's The Boys
Death Stranding's Hideo Kojima ayaa shaaca ka qaaday inuu mar karinayay mashruuc la mid ah taxanaha halyeeyga weyn ee Amazon The Boys. "Waan joojiyay ka dib seddex qaybood oo xilli ciyaareed ah," Kojima ayaa ku soo qoray Twitter, isaga oo ka hadlaya taxanaha. “Waxaan u maleeyay inaan daawan doono inta ka hartay bandhigga. Runtii, waxaan daawaday qaybo yar oo laga jeediyay goobta… Akhri wax dheeraad ah
Warshadaha ciyaaraha fiidyaha ee Quebec waxa saamayn doona sharciga luuqada ee muranka dhaliyay
Shirkadaha ciyaaraha fiidyaha ee Québec waxa saamayn doona sharciga luuqada cusub ee muranka dhaliyay. Ujeedada sharciga 96 waa in la xoojiyo sharciyada luqadda ee gobolka ku hadla afka Faransiiska, hubinta in Faransiisku yahay luqadda ugu weyn ee looga hadlo wax kasta laga bilaabo ganacsiga ilaa daryeelka caafimaadka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga cabsi qabaa in tani ay ka fogaato kuwa aan Faransiiska ku hadlin ee warshadaha ciyaaraha fiidyaha ee Québec. … Akhri wax dheeraad ah
Dib u maamulaha Blade Runner oo si weyn loo gilgilay hadda waxa ku jira nooca aan dib loo maamulin ee Steam
Dev tweets sawirkii ugu horeeyay ee PS VR 2 duurjoogta ah, tirtirto
Dhammaanteen waan ognahay inay ku socoto jidkeeda, laakiin PS VR2 weli waa wax sir ah kuwa naga mid ah oo aan si gaar ah u gelin shaqada gudaha ee Sony. Si kastaba ha ahaatee, hal horumariye ayaa wadaagay (oo si degdeg ah meesha uga saaray) sawirka PS VR2 ee lagu dejiyay aduunka dhabta ah. Sawirku wuxuu ka yimid Bit… Akhri wax dheeraad ah
Xirmooyinka cusub ee Resident Evil waxay wax u dhimaan muuqaalka oo si adag u garaacaan waxqabadka
Ma helin wax badan oo ku habboon in aan sheego, laakiin shaki kuma jiro taas: taageerada raadinta ray-ga ayaa kor u qaadeysa tayada guud, gaar ahaan sababtoo ah dib-u-fiirinta RT waxay bedeshaa muraayadaha muuqaalka xun ee laga helay nuqulkii hore. Iftiinka caalamiga ah ee Ray-raad-raacu sidoo kale waa qodob wanaagsan oo lagu daray, oo beddelaya indho-indheynta-screen-space-ka oo leh si aad u sax ah… Akhri wax dheeraad ah
Harvestella waxay u egtahay sida Final Fantasy oo la kulmay Stardew Valley
Harvestella waa sim-nololeedka cusub ee RPG oo ka yimid Square Enix oo u socda Switch iyo Steam bisha Noofambar. Waa Fantasy-ga kama dambaysta ah ee la kulma Stardew Valley, oo leh ciyaar ay ka mid yihiin xannaanaynta dalagyada, saaxiibtinimada dadka magaalada, iyo sahaminta godadka. Farshaxanka fikradda waxaa iska leh Isamu Kamikokuryo ee caanka ah Final Fantasy 12, muusiga waxaa iska leh Go Shiina ee taxanaha Sheekooyinka. … Akhri wax dheeraad ah
Gmail ee Android, iOS waxay ku daraan tilmaame ku habboon 'Kaydinta la isticmaalay
30 June 2022 by Tilmaame
Shabakadda, Gmail waxa ay muddo dheer xustay inta kayd ee aad isticmaalayso xagga hoose ee bogga. Tilmaanta "Kaydinta la isticmaalay" hadda waxay ku jirtaa Gmailka Android iyo iOS si ay kaaga badbaadiso inaad u baahato inaad furto app kale ama degel kale oo loogu talagalay maaraynta booska. dheeraad ah…. Maqaalka asalka ah
RIP RTX 3080 12GB - ma ahayn inaad markii hore jirtay
Nvidia waxaa lagu qiyaasaa inay joojisay wax soo saarkeeda kaarka garaafyada ee GeForce RTX 3080 12GB, kala duwanaanshiyaha ugu awoodda badan ee RTX 3080 GPU asalka ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado in tani aysan ahayn ogeysiis rasmi ah markaa ku qaado macluumaadkan xoogaa milix ah, laakiin isticmaale Twitter-ka iyo xamaasaha GPU @Zed_Wang ayaa sheeganaya in kaarka uusan ... Akhri wax dheeraad ah
Categories DIB U EEGIDDA Leave a comment
Asus ROG Phone 6 imanaya Julaay 5 oo leh biyo iska caabin ah iyo taageere qaboojin kale oo waalan
Asus ROG Phone lineup waxaa ka buuxay fursado awood leh oo si wanaagsan loo sameeyay, iyo qaab cusub ayaa ku dhow geeska. Daadadyada qaar ka sokow, waxaan hadda haysanaa waxa u muuqda taariikhda la sii daayo Asus ROG Phone 6. dheeraad ah… Maqaalka asalka ah
Nintendo Direct Mini: Persona 5 Royal, Persona 4 Golden, iyo Persona 3 oo la qaadan karo
Nintendo Switch wuxuu ahaa mawduucyo badan, xanta badan sannadihii la soo dhaafay, laakiin midkoodna si aad ah ugu adkaystay ereyga in taxanaha Persona uu u iman doono console-ka. Intii lagu guda jiray baahinta Nintendo Direct Mini ee ugu dambeysay, xantaas ayaa ugu dambeyntii noqotay xaqiiqo. Saddexda koox ee Persona 5 Royal, Persona 4 Golden, iyo… Akhri wax dheeraad ah
Categories Nintendo, DIB U EEGIDDA Leave a comment
Nintendo Direct Mini: Ku Nool Demo Toos ah Oo Laga Heli Karo Hadda eShop-ka
Live A Live, halyeeyga SNES RPG ee aan waligiis helin deegaan rasmi ah halkan Galbeedka, ayaa imanaya Nintendo Switch July 22. Haddii aad rajaynaysay inaad ciyaarta siisid dabayl ka hor inta aanay ku dhicin dukaamada, Nintendo ayaa kaa daboolay: waxaa jira bandhig toos ah eShop-ka hadda. Qabso kursi… Akhri wax dheeraad ah
Xeerka Callisto wuxuu noqon doonaa ciyaar aad uga xiiso badan marka loo eego Space Dead
Glen Schofield waxa uu dareemayaa nasasho. Waxay ahayd, waxaad dareemaysaa, dabayl cirwareen ah dhowr toddobaad abuuraha Space Dead, kooxdiisa cusub oo ugu dambeyntii soo saartay muuqaalkii ugu horreeyay ee muuqaalkeeda quruxda badan, jilicsanaanta iyo naxdinta leh ee cabsida hawada sare ee Calisto Protocol ee Geoff Keighley's Summer Games Fest - muujinta calaamad muujinaysa guul muhiim ah oo ka dhacday… Akhri wax dheeraad ah
© 2022 TechGameBox • Lagu dhisay GeneratePress